Halkaan ka Daawo Shirka magaalada Dhuusamareeb | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Halkaan ka Daawo Shirka magaalada Dhuusamareeb
Halkaan ka Daawo Shirka magaalada Dhuusamareeb
Waxaa goordhaw magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug si rasmi ah uga furmay shir wadatashi ah ay yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada dalka ee hoostaga dowlada Federaalka Soomaaliya.
Shirkan ayaana furitaankiisa la filayaa in Madaxda kala duwan ee maamul goboleedyada dalka in khudbado ka jeediyaan, waxa ayna Madaxda ka hadli doonaan aragtidooda ku aadan doorashada wali aan lagu heshiin waqtiga ay dhaceyso.
Sida qorshuhu yahay shirkan ayaa socon doona mudo sadex maalin ah, waxaana furitaanka shirka kadib madaxda maamul goboleedyada ay yeelan doonaan kulamo albaabada u xiran yihiin.
Gabo gabada shirka maanta magaalada Dhuusomareeb uga furmay madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa la filayaa in War murtiyeed wadajir ah laga soo saaro ayna uga hadlaan arimo badan oo xasaasi ah ay kamid tahay doorasho.
Previous articleHey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda oo shacabka Somaliyed ku war galisay in Bari dib loo bilaabi doono shaqada. Sawiro
Next articleWar Deg deg ah Ra iisal wasaare Kheyre oo Maalinta Bari ku wajahan magaalada Dhuusamareeb
Geeridii Jilaa caan ah oo ka tirsan Bollywood-ka oo waji cusub...
Cali Khaliif Galeyr ” Sool, iyo Sanaag sida loo dhisay ...